PSG - PSG: Hishiiskaas waa mid udhaxeeya Paris SG, Barca ayaa saadaalisay - FOOT 01 - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »PSG - PSG: Weeraryahankaasi wuxuu uxaqiijiyay Paris SG, Barça ayaa saadaaliyay - FOOT 01
Paris Saint-Germain iyo FC Barcelona oo ka soo horjeeda suuqa kala iibsiga, waxay noqoneysaa caado.
Naadiga Catalan ayaa inta badan isku deyeysay in ay kooxda Parisians soo jiidato sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo aan guuleysan. Marquinhos, Marco Verratti, Angel Di Maria ... Isku day aan la isku haleynin Barca ayaa guuleysatay. Inkastoo xiddiga reer France, uu goolal ku dhaliyay Neymar oo ku sugnaa 2017. Tan iyo markaas, xiisadaha ayaa u muuqda u dhexeeya labada kooxood, si joogto ah u xiiseynaya isla bartilmaameedyada suuqa kala iibsiga. Tani waxay sharraxeysaa soo bandhigista Blaugrana bilowgii xilli ciyaareedkan.
Xaqiiqdii, Mundo Deportivo wuxuu digniin u dirayaa hoggaamiyaha Barca, wuxuu ku qancay in Parisians uu filayay inuu ciyaarayo khiyaamo wasakh ah. " PSG waxay na siin doontaa dhibaato Waxay sii deyn lahayd ilo lagu kalsoonaan karo. Ugu dambeyntiina, Paris ayaa ku guuldareysatay inay xado Frenkie de Jong, mana aysan ku adkeysan Antoine Griezmann Faransiiska. Laakiin daafaca dhexe ee Ajax Amsterdam Matthijs de Leif, ayaa hogaaminaya Nasser Al-Khelaïfi, waxaana ay u muuqataa inay xaqiijineyso sida ay u saadaalineyso Barcelona.
Argentina vs. Colombia - Warbixinta Kubadda Cagta - 15 June 2019 - ESPN